Masinina fitrandrahana plastika, milina famolavolana plastika, milina fanamafisana plastika, milina fanodinana plastika-CHINA JWELL Machines Co., Ltd.
Marika amin'ny indostrian'ny milina plastika sinoa.
Mifandraisa aminay Zahao ireo vokatra maro hafa
CHINA JWELL Machinery Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny famokarana tsipika extrusion ho an'ny
ravina plastika, takelaka, sarimihetsika, mombamomba, fantsom-pohy, famolavolana, milina fanodinana ary fanodinana.
CHINA JWELL Machinery Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny famokarana tsipika extrusion ho an'ny ravina plastika, takelaka, sarimihetsika, mombamomba, fantsom-pohy, famolavolana, milina fanodinana ary fanodinana. Ny orinasa dia manana toby famokarana dimy izay any Shanghai, Suzhou, Changzhou, Zhoushan ary Guangdong. Ny faritry ny fananganana ny fotodrafitr'i Changzhou dia mihoatra ny 266,666 metatra toradroa, hita ao amin'ny valan-javaboary teknolojia Jiangsu zhongguancun, tanànan'ny Liyang, faritanin'i Jiangsu, mpanamboatra teknolojia avo lenta manokana momba ny fikarohana sy ny fampiroboroboana ny fitaovana fitrandrahana plastika; manana R&D avo lenta sy manana traikefa izahay ekipa injeniera mekanika sy elektrika ary koa fananganana mandroso sy fivarotana fivoriambe normative. Ny fanahin'ny orinasanay dia "mitandrina, maharitra, mailaka ary milamina", mandray an-tanana ny mpanjifa vaovao sy taloha hitsidika anay amin'ny famotopotorana, fitarihana ary fiaraha-miasa. Faly izahay manolotra fanampiana matanjaka!
Ny mpanjifanay dia manerana an'i Chine, ary manana mpanjifa any Rosia, India, Korea, Indonezia, Moyen Orient, Amerika atsimo, Espana, Italia ary firenena sy faritra hafa izahay. Ny masininay dia eken'ny mpanjifanay tsara.
Zahao NY FANAMBARANA LEHIBE
Serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra
Nandritra ny taona maro, dia nandinika ny serivisy alohan'ny varotra sy ny varotra aorian'ny varotra izahay, manome vahaolana ho an'ny mpampiasa sy vokatra avo lenta.
Mihaino, maharitra, mailaka ary milamina